साहस उर्जाले असोज ६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्ने, क–कसले दिन पाउँछन् आवेदन ? « dainiki
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार १०:४४
साहस उर्जाले असोज ६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्ने, क–कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?
२९ भदाै, काठमाडौँ । साहस उर्जा लिमिटेडले असोज ६ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि साधार सेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्री गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अंकित दरमा ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ७० लाख कित्ता साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने लागेकाे हाे । जसमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात २ लाख १० हजार कित्ता शेयर कर्मचारी, ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोष र बाँकी ६४ लाख ४० हजार कित्ता सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले असोज १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा असोज २० गतेसम्म आवेदन दिने समयावधि थप हुनेछ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता लागि र अधिकतम १० लाख ५० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०७८, मंगलवार १०:४४